ဂရိက အေမရိကန္ႏွင့္ဆိုက္ပရက္စ္တို႔ႏွင့္ ေျမထဲပင္လယ္အတြင္းပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ ( တူရကီနဲ့ ဂရိတုိ့ တပြဲ တလမ္း စမ္းဖုိ့ ျပင္ဆင္ေနႀကပါျပီ….) – New Of Burmese
ဂရိက အေမရိကန္ႏွင့္ဆိုက္ပရက္စ္တို႔ႏွင့္ ေျမထဲပင္လယ္အတြင္းပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ ( တူရကီနဲ့ ဂရိတုိ့ တပြဲ တလမ္း စမ္းဖုိ့ ျပင္ဆင္ေနႀကပါျပီ….)ဂရိမီဒီယာမ်ားအဆိုအရ သုံးပြင့္ဆိုင္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသုံးႏိုင္ငံ၏အင္အားစုမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို Greek National Defense General Staff က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
ဂရိက အမေရိကန်နှင့်ဆိုက်ပရက်စ်တို့နှင့် မြေထဲပင်လယ်အတွင်းပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကိုပြုလုပ် ( တူရကီနဲ့ ဂရိတို့ တပွဲ တလမ်း စမ်းဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ….)ဂရိမီဒီယာများအဆိုအရ သုံးပွင့်ဆိုင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံ၏အင်အားစုများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများကို Greek National Defense General Staff က ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ဂရိနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တို့သည် ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီ မှစ၍ မြေထဲပင်လယ်အရှေ့ပိုင်းတွင် ပူးပေါင်း၍ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တူရကီသတင်းစာ Zaman ကဖော်ပြခဲ့ပြီး အဆိုပါနိုင်ငံများသည် တူရကီနှင့် အဆင်မပြေမှုဖြစ်နေသည့် နိုင်ငံများလည်းဖြစ်သည်။ဂရိနဲ့ဆိုက်ပရက်စတို့ဟာ အီဂျစ်၊ UAE ၊ ပြင်သစ် နဲ့ အစ္စရေးတို့လို တူရကီကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အရှေ့ဘက် မြေထဲပင်လယ်ဒေသမှာ တူရကီရဲ့ စူးစမ်းလေ့လာနေမှုတွေကို အစဉ်တစိုက်ဆန့်ကျင်နေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article “ကိုဗစ္ကို အျမစ္ျဖဳတ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ထာဝရ ယွဥ္တြဲေနသြားရေတာ့မည္ဟု ကာကြယ္ေဆးကုမၸဏီ အႀကီးအကဲေျပာ”
Next Article ေရေတြပန္းခရမ္းေရာင္ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းသြားတဲ့ စင္ကာပူက ဆန္တိုဆာကြၽန္းလူေနအိမ္ယာရပ္ကြက္။